Nanome vola ny fianakaviany: navotsotr’ireo mpaka an-keriny ilay Karana vavy | NewsMada
Nanome vola ny fianakaviany: navotsotr’ireo mpaka an-keriny ilay Karana vavy
Navotsotr’ireo jiolahy teny amin’ny Digue, ny asabotsy tamin’ny 7 ora sy 30 mn hariva, ilay vehivavy karana antsoina hoe Sabira Vasram, nalain’ny jiolahy an-keriny, ny zoma hariva teo. Nanome vola ireo mpaka an-keriny ny fianakaviany…
Tsy mbola fantatra mazava aloha, hatreto, ny vola nomen’ny fianakaviana ireo jiolahy taorian’ny fifandresen-dahatra teo amin’ny roa tonta. Nisy ny vola takalonaina lasan’ireo mpaka an-keriny, araka ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny fikambanan’ny Karana mizaka zom-pirenena frantsay eto Madagasikara (CFOIM). Navotsotr’ireo mpaka an-keriny teny amin’iny lalana Digue i Sabira Vasram, afakomaly hariva. Reraka ity vehivavy karana nalain’ny jiolahy an-keriny ity tamin’ny fotoana nandraisan’ny fianakaviana azy teny amin’ny Digue.
Tsiahivina fa fakana an-keriny fanindiminy tao anatin’ny roa herinandro ity nitranga tamin’ny zoma hariva ity. Nalain’ireo mpaka an-keriny teo amin’ny parking Assist Ivandry izy, ny zoma tamin’ny 12 ora sy 30 mn. Jiolahy miisa dimy nitondra basy Kalachnikov no tompon’antoka tamin’izany. Tsy nanampo na inona na inona ilay vehivavy karana tamin’ny fotoana nakan’izy dimy lahy an-keriny azy. Novakin-dry zalahy ny fitaratry ny fiaran’ilay vehivavy karana ka nosintonin’ireo jiolahy niditra tao anaty fiara 4×4 iray miloko mainty nentin’izy ireo izy ity. Toy ireny amin’ny horonantsarimihetsika ireny ny fomba nanatanterahan’ireo jiolahy ity fakana an-keriny ity. Nahita ny fihetsik’ireo jiolahy ny mpiambina, saingy tsy afa-nanoatra. Vadina tompona orinasa mpivarotra fiara eny Ankorondrano i Sabira Vasram. Handeha hisakafo antoandro miaraka amin’ny fianakaviany izy no nifanehatra tamin’ireo jiolahy mpaka an-keriny.
Tsy misy vokany ny ady amin’ny fakana an-keriny
Fakana an-keriny teratany karana faha-113 ity nitranga ny zoma lasa teo ity hatramin’ny 1991 ka hatramin’izao. Ny taona 2017, miisa 11 ireo trangana fakana an-keriny raha valo kosa ny tamin’ity taona 2018 ity. Nilaza ny fikambanan’ny Karana mizaka zom-pirenena frantsay eto Madagasikara (CFOIM) fa efa tafahoatra loatra ary tsy misy intsony fanajana ny maha olona satria efa ataon’ny sasany “business” ny fakana an-keriny. Toa tsy misy vokany akory ny filazana nataon’ny praiminisitra sy ireo minisitra milaza fa hiady amin’ny fakana an-keriny.
Nisy ny fananganana ny rafitra manokana hiadiana amin’ny asa fakana an-keriny na ny Cellule mixte d’enquête (CME) ivondronan’ny polisim-pirenena, ny zandarimariam-pirenena, ny avy eo anivon’ny fitsarana, ny CFOIM ary ireo orinasa tsy miankina misehatra eo amin’ny tontolon’ny fifandraisana. Napetraka, noho izany, ny paikady manokana iarahan’ny vondron-kery rehetra hiadiana amin’izany tranga izany. Nahitam-bokany izany satria miisa 24, hatreto, ireo olona voarohirohy momba ny fakana an-keriny efa natolotra ny fitsarana sy naiditra am-ponja.